Muon Suite 1.3 (alpha1) la heli karo [Sawirro] | Laga soo bilaabo Linux
Muon Suite 1.3 (alpha1) la heli karo [Sawirro]
Ya waxaan kaaga sheegnay Muon Suite, waxaan si faahfaahsan u sharraxeynaa waxay ku saabsaneyd, faa iidooyinka iyo wax intaa ka badan Suunka Muon: Muon Suite v1.2.1 la sii daayay [Faahfaahin]
Maxaa dhacaya ayaa ah in Alpha1-ka nooca 1.3 uu haddaba diyaar yahay, dadka isticmaala Kubuntu u isticmaali karaa adoo ku daraya kana cusbooneysiinaya Tijaabada PPA QApt
Halkan waxaan idinkaga tagayaa warka faahfaahsan, oo wata sawirro iyo wax walba
1 Maamulaha Xidhmada Muon:
2 Xarunta Muon Software:
3 Muon Maareeyaha Cusbooneysiinta:
Maamulaha Xidhmada Muon:
Wadahadal xaqiijin ah oo lagu daray markii isbeddelada hal xirmo ay u baahan yihiin isbeddello xirmooyinka kale. Wadahadalkan waa laga naafoobi karaa dookhyada haddii la doonayo.
Hadda xulashada baakado badan ayaa saddex jeer ka dhakhso badan sidii hore.
Dhibaatooyinka jiray markii xirmo aan la xakamayn karin si loo rakibo ama loo cusbooneysiiyo maxaa yeelay waxay ku tiirsaneyd xirmo kale, dhibaatooyinkaas waa la xaliyay.
Xarunta Muon Software:
Magaca xirmada ayaa hadda laga akhrisan karaa bog kasta oo faahfaahsan.
Isticmaalaha ayaa hada heegan la galiyay markii ay tirtirayaan codsi kaas oo isna tirtiri doona xirmooyinka kale.
Shaashadda shaashadda 'Pop-Up' waxaa lagu beddelay daaqad gudaha ah oo ku taal bogga faahfaahinta arjiga. Hadda waa saamayn qasayo, asal hufan, leh animation iyo soo gaabin ... aad uga fiican 😀
Muon Maareeyaha Cusbooneysiinta:
Waxaa dib loogu qoray qaabkan. Kahor intuusan ahayn uun "Lite" ama "demo" version ("la jarjaray" waa eray ku habboon waxaan u malaynayaa) Muon Package Manager, laakiin aan lahayn miirayaal iyo xulasho raadin. Naqshaddan cusub ee nooca 1.3 ah, sida aad u aragto, waa mid dareen badan, adeegsadna u roon, oo ku jihaysan si fudud "cusbooneysiin", taas oo ah waxa ku saabsan dhammaadka.
Cusboonaysiinta waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood:
Cusbooneysiinta xirmada aan aheyn barnaamijka (tusaale, maktabadaha iyo wixii lamid ah).
Cusbooneysiinta amniga, hagaajinta nuglaanta iyo wixii la mid ah.
Tani waxay u oggolaaneysaa isticmaaleha inuu cusbooneysiiyo kaliya waxa dhabta ah ee iyaga xiiseynaya, taasi waa ... qaar badan oo keliya ayaa doonaya inay cusbooneysiiyaan waxa ay indhahooda ku arki doonaan, taasi waa: Isbeddelada ku dhaca codsiyadooda.
Qaybintaan cusub waxay awoodi doonaan inay ku sameeyaan dhibaato la'aan.
Inta lagu guda jiro howsha cusbooneysiinta waxaa la soo bandhigi doonaa bar horumarka ah oo muujinaya heerka hadda ee howsha.
Intaas waxaa sii dheer, isticmaaluhu waa la ogeysiinayaa haddii uu bilaabo inuu cusbooneysiiyo nidaamka oo uusan haysan qalabka ku xiran awoodda. Sidoo kale digniinta ayaa lagu soo bandhigi doonaa haddii ay dhacdo bartamaha habka cusbooneysiinta, fiilada ayaa la jaray.
Guud ahaan ... Maareeyaha Cusboonaysiinta cusubi aad buu uga fiicanyahay sidii hore, waa ka turxaan badan yahay, ka xiiso badan yahay uguna qurux badan 🙂
Waxaad ku arki kartaa isbeddelada qaab aad u faahfaahsan (iyo farsamo) xiriiriyeyaashaan: Kala beddelka 1 & Kala beddelka 2
Si daacadnimo ah ... daacad ah ... Kubuntu ayaa markale i garaacaysa, hadaanay ahayn "xasillooni darrada" arrinta iyo xaqiiqda fudud ee aan ahayn Sii deynta Rolling, Mar hore ayaan isticmaali lahaa Kubuntu.
Suunka Muon Waa wax runtii indhahayga soo jiita, waa mashruuc aad u xiiso badan, horumarintani waa mid aad u xiiso badan, xiiso leh, waxaan jeclaan lahaa inaan awood u yeesho adeegsiga, tijaabiyo, arag sida ay u shaqeyso.
Laakiin, waan la qaboojiyaa tayda halka haha, waxaan dareemayaa xoogaa maseyr ah kuwa isticmaala Kubuntu, waxay leeyihiin codsigan aadka u weyn, AAD AAD U HAYAAN rajo, sidaa darteed nasiib wacan iyo rajo ayaan rajeynayaa in horumarka uu u sii socdo sida cajiibka ah sidii ay ahayd ilaa iyo haatan.
Isha xogta iyo sawirada: JonTheEchidna
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Muon Suite 1.3 (alpha1) la heli karo [Sawirro]
Dhibaatada intee le’eg ayay Kubuntu ku haysaa xasiloonida? Waxaan dhihi lahaa wax aan ka badneyn Ubuntu. Hagaag, buntu LTSs waa mid aad iyo aad u deggan, oo ay ku jiraan Kubuntu!
Waad salaaman tihiin kuna soo dhawow goobta 😀
Dhibaatada Kubuntu (ugu yaraan aragtidayda) ayaa ah inay jiraan laba ikhtiyaar, isticmaal LTS (Lucid hadda) ama isticmaal nooca ugu dambeeya (Oneiric).
Haddii aan isticmaalo Lucid haa, waxaan sugi lahaa xasillooni, laakiin ma awoodi doono inaan ku raaxeysto noocyada ugu dambeeya ee codsiyada, sababtoo ah waxay qaadanayaan waqti aad u dheer inay galaan Lucid repos (LTS hadda).
Haddii kale haddaan isticmaalo nooca ugu dambeeya (Oneiric) haa, waxaan heli doonaa noocii ugu dambeeyay ee codsiyada, laakiin ugu yaraan khibradaydu waxay ii sheegtay inaan la kulmi doono arrimo xasillooni darro ah. Tusaale ahaan, plasma-desktop wuu burburaa sabab la'aan, wax sida fudud u qeexaya in faylasha .PNG lagu furi doono codsi kale, wali wuu "xayiran yahay" mana xirayo daaqadda si uu u xusho arjiga kale, ma jirto .. waayo-aragnimadayda Kubuntu ma ahayn Wax wanaag ah oo aan ahayn, in aan ku xuso in ay isticmaasho wax ka badan tusaale ahaan ArchLinux + KDE, Debian + KDE, kaliya in aan bixiyo laba tusaale.
Tani waxay ahayd wixii aan awooday inaan qiimeeyo, iyada oo ku saleysan khibradeyda.
mmmm waa inaad isku daydaa appSet, chakra frontend for pacman, waa aur sidaa darteed sinaba laguuguma sheegi karo inaad rakibato sikastaba waxaan isku dayi doonaa inaan kuu soo diro xalka sida ugu dhakhsaha badan markaan haysto pc-kayga mar kale uu
= Waxaad ka eegi kartaa tooska 'chakra livecd', waa wax xiiso leh sidoo kale inay maamuli karto aur (ama haddii ay dhacdo chakra ccr ... waxaan u maleynayaa), waa inay jirtaa qaab aad u isticmaali karto haddii waad dooneysaa ... Uma maleynayo inay leeyihiin ku tiirsanaan badan
Runtii waan jeclahay pacman sida ay tahay, GUI la'aanteed 😀
Waxa ugu badan ee igu dhaca Muon waa horumarkiisa, taasi waa ... anigoo og inuu horumar sameynayo, markaan arko horumarkiisa, dookhyadiisa cusub, anigu garan maayo ... Waxaan u arkaa mid xiiso leh, way i dhiirrigelisaa Mu
Waxaan siin doonaa MUON fursad kale oo aan u isticmaali karo adeegso iyo karti 😀
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loogu rakibo debian, maaddaama muon ay u adeegsadaan ubuntu, shabaqa ma aanan helin sida loogu rakibo baaritaanka debian-ka.
T_T… waxaan horeyba u nahay laba T_T…
Qaar ka mid ah waxa Fedora 17 na keenaya
AMD (ATI) iyo dhibaatooyinka weligeed ah